Marika manokana: ohatra | Famoronana an-tserasera
Nandritra ny taona vitsivitsy, ny marika manokana dia teny izay heno hatrany ary ampianarina amin'ny taranja ara-barotra maro mba hanamafisana ny fandraharahana, na freelancer izy ireo na orinasa lehibe. Inona anefa no atao hoe marika manokana? Inona no ohatra amin'ny marika manokana ananantsika fahombiazana?
Raha te-hahafantatra koa ianao hoe iza no tokony hotadiavinao hamorona ny maha-marika anao amin'ny Internet sy hanao anarana ho anao dia ho anao ity.
1 Inona no atao hoe personal branding
2 Marika manokana: ohatra amin'ny fahombiazana harahina
2.8 Carlos Arguinano
Inona no atao hoe personal branding
Ny marika manokana dia azo faritana amin'ny fehezanteny iray nolazain'i Jeff Bezos, Tale Jeneralin'ny Amazon teo aloha:
"Izany no lazain'izy ireo momba anao rehefa tsy ao amin'ny efitrano ianao."
Saingy raha mandinika lalindalina kokoa ny zava-drehetra ao anatiny isika, dia azontsika atao ny mihevitra azy io ho "ny maha-izy azy sy ny maha-zava-dehibe izay anomezantsika ny maha-olona antsika virtoaly sy ara-batana mba hananganana fifandraisana amin'ireo mpampiasa hafa, na virtoaly na ara-batana." Raha lazaina amin'ny teny hafa, io no fototry ny orinasanao, ny fomba famaritany ny tenany, ny fomba fiteniny, ny fomba fitafy...
Mba hamoronana azy dia mila manao fikarohana lalina ianao izay ahitana:
Ho an'ilay olona, ​​satria tsy maintsy fantatrao hoe iza ilay olona, ​​inona no hain'izy ireo ary inona no tsy?
Ny tanjona azo, hatramin'izay vao azo tratrarina ny paikady.
Fantaro hoe iza no mpihaino anao. Izany no fomba hahatongavan'ny hafatra amin'ny olona tianao. Maso, tsy midika izany fa tsy maintsy miova ianao ary mitady izay tian'ny mpanjifanao, tsia. Tsy maintsy miavaka sy tsy miova ny maha-izy anao satria tsy ho marika manokana izany.
Marika manokana: ohatra amin'ny fahombiazana harahina
Mitandrema amin'ny fijerena ny marika manokana an'ny hafa, satria mivantana na ankolaka, azonao atao ny mandika azy ireo ary ny anton'izany dia ny fanehoanao ny tenanao amin'ny fomba hanatratrarana ny mpampiasa anao.
Izany hoe, eto ambany dia hanome anao ohatra vitsivitsy momba ny marika manokana izay afaka manentana anao sy manampy anao hamaritra ny fomba tianao hanaovana izany.
Mpanazatra raharaham-barotra i Marie. Izany dia midika hoe matotra, lavitra ary tena kolontsaina. Tsy manao izany anefa izy, fa avadika ho zavatra mahafinaritra, tsy ho very saina na ny vaovao omeny.
Ny marika manokana azy dia mifantoka amin'ny vondrom-piarahamonina sy ny vokatra momba ny info, ary noho izany dia mampiasa ny ampahany hita maso (eo amin'ny tranokala, ny horonan-tsary, sns.) izy fa koa amin'ny lahatsoratra ataony ao amin'ny bilaogy, izay mahafinaritra sy mampiala voly, amin'ny fotoana mitovy Izay manome anao angona tena sarobidy.
Mieritreritra momba ny teknolojia dia mieritreritra an'i Steve Jobs, mpiara-manorina an'i Apple izay efa naniry ny hanomboka, dia nahafantatra fa ny marika manokana dia zava-dehibe raha te hivarotra ianao.
Hainy ny manavaka ny tenany amin’ny fifaninanana ataony, tsy amin’ny zavatra ataony ihany, fa amin’ny tenany ihany koa. Raha tokony hiakanjo tsara sy hiseho ho “hareny” izy, dia manao akanjo tsotra ary mampiasa fifampiresahana hentitra mba handresena ny vahoaka.
Tsy tahaka ny ankamaroan'ny Vehivavy Voalohany ao Etazonia i Michelle Obama fa nahay namorona ny marika manokana ankoatra ny an'ny vadiny. Ary nanao izany izy tamin'ny fifantohana sy fanasokajiana ny sehatra tiany toy ny fanabeazana, ny feminisma, ny fahasalamana, ny fanavakavahana.
Feno fitantarana ny fandraisany anjara, izany hoe mitantara angano, fijoroana vavolombelona, ​​tantara niainany ary iarahany miombom-pihetseham-po sy mifandray amin’ny vahoaka.
Mety tsy ho fantatrao ny anarany. Mety ho fantatrao anefa ilay boky hoe “Dad Rich, Poor Dad”. Ity mpanoratra, mpandraharaha ary mpandahateny ity dia iray amin'ireo malaza indrindra any Etazonia ary afaka namorona ny marika manokana amin'ny alàlan'ny fifantohana amin'ny fanolorana tolotra sy ny fihaonambe ho an'ny orinasa.
Mazava ho azy fa efa namoaka boky, lalao board, sns ihany koa izy.
Bill Gates dia tahaka an'i Steve Jobs, vaky ny teknolojia. Ny mpiara-manorina ny Microsoft dia iray amin'ireo mpandraharaha malaza sy manan-danja indrindra eran'izao tontolo izao ary ny marika manokana dia afaka nampifanaraka ny fotoana.
Inona no azontsika lazaina aminao momba ny marikao? Eny, mifototra amin'ny fiezahana hitady ny lafiny mamiratra sy fanatsarana ny fanatontoloana. Saingy avy amin'ny fomba tsotra foana, ny fisehoana ho toy ny olona mahazatra miaraka amin'ny tanjona hanampy ny hafa.
Manakaiky kokoa ny tenantsika izahay, ary amin'ity tranga ity ny ohatra omenay anao dia iray amin'ireo SEO tsara indrindra any Espaina, Luis Villanueva.
Raha fantatrao izy dia ho fantatrao fa olona misokatra ho an'ny rehetra izy, mihaino ny rehetra ary mahafantatra rehefa diso izy, ankoatra ny fandraisany ny fasika.
Ny fomba fiteniny dia tsotra, miombom-pihetseham-po ary mikatsaka ny hahatonga azy io ho resaka milamina sy mahafinaritra, izay tsy hianaranao fotsiny, fa saika tsaroanao isaky ny teboka ny zavatra nataony na nolazainy.
Isra Bravo dia iray amin'ireo mpanoratra kopia miteny espaniola tsara indrindra amin'izao fotoana izao, ary nanangana ny marika manokana angamba tamin'ny fomba hafa noho ny hafa izy. Ny andian-teny toy ny hoe “Andao hojerentsika fa hisy…”, “zavatra iray”, “tsara”, “angamba ary hianatra zavatra ianao” dia apetrany ao amin'ny maro amin'ireo mailaka ary izany dia mampahafantatra ilay olona marina hoe iza no iresahany.
Mivantana amin'ny zavatra ataony izy ary ny mailaka, toy ny pejiny, dia solontenany, olona tsy mandany fotoana ary tsy mandany ny hafa.
Nijanona teto amintsika ilay andian-teny nataon’i Arguiñano hoe “manankarena, manankarena ary manana fototra” na ilay hoe nasiana persily tamin’ny zavatra rehetra. Izy no iray amin'ireo mpahandro voalohany nanavaka ny tenany tamin'ny hafa tamin'ny fanaovana "mahafinaritra" ny fandrahoan-tsakafo. Ary rehefa mahandro isika dia tsy matotra amin'ny fampidirana ireo akora rehetra, ary tsy mifantoka amin'izany.
Miresaka amin'ny olon-kafa izahay, mijery fahitalavitra… Ary izany no nataony. Rehefa mahandro izy, dia hovelominy amin’ny vazivazy na ny tantarany ny fomba fanaony sy ny dingana ataony, toy ny hoe miresaka mifanatrika amin’olona.
Araka ny hitanao dia misy ohatra maro momba ny marika manokana izay afaka manentana anao hamorona ny anao manokana. Fa ny tena zava-dehibe dia tsy ny mody hoe olona tsy maha-izy anao, fa ny hampiroborobo ny ampahany tianao ho fantatry ny hafa sy ny hahatonga azy ireo hahita ny tenany ho hita taratra ao aminao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Marika manokana: ohatra
Fampiharana hamorona logos